Kalsoonida booliska loo qabo oo kor u kacday - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kalsoonida booliska loo qabo oo kor u kacday
La daabacay onsdag 20 januari 2016 kl 10.35
" Saldhig boolis ayaa dhowaan xaafada Rinkeby laga furi doona"
Kalsoonida ay dadweeynuhu u qabaan booliska ayaa soo korodhay. Hasayeeshe tan ayaa weli xaafadaha ay ajaanibtu ku badanyihiin ku yar.
Dan Eliasson oo ah talliyaha ciidanka ammaanka ayaa sheegay in isbedel dhinacan looga baahan yahay.
-Waa in aanu dadyowga ku soo dhawaano. Kalsoonida markey noo qabaan wey noo warramayaan, wey na taageerayaan, maxkamadaa ayey ka markhaati kacayaan, ayuu sheegay Eliasson.
Booliska ayaa beryahaan dhaleecayn xoog leh loo gudbiyay, tusaalahan si ay u xalliyeen xaflada sanadlaha ee We Are Stockholm oo sannad walba stockholm lugu qabto, halkaas oo ay cadaatay in dhowr hablood lugu faroxumeeyay islamarkaas na ay boolisku arrimahan la socdeen, hasayeeshe wax ka qaban.
Laakin badanka dadyoowga Iswiidhan ayaa taageersan shaqada u boolisku qabto, sidaas waxa sheegay baadhitaanka SOM oo ay jaamacada magaalada Göteborg shaacisay.
Boqolkiiba 61 ayaa taageeraya booliska, halkey tirodani ka ahaan jirtay boqolkii ba 55. Sido kale heeyada ka hortaga ee BRÅ ayaa iyaduna todobaadkii hore sameeysay baadhitaan sheegaya in ay taageeradu ku soo kordhay booliska. Tan ayaa noqotay tii ugu sareeysay tobankii sanno ee ugu dambeeyay.
-Weli waxaanu aragna in ay kalsoonida loo qabo booliska ku hooseeyso xaafadaha ay ajaanibtu ku badanyihiin. Booliska keli maaha, waa dhamman heeyadaha waddanka oo aan kalsooni loo qabin. Wa shaqo anaga na sugaysa in aanu xidhiidh wanagsan la sameeyno dadkan, ayuu jidhi Eliasson.
Isniintii ina soo dhaaftay ayaa xaafada Alby ee Stockholm dhagax lugu tuuray booliska iyaga oo xaafada u yimid in ay dab demiyaan.
Talliyaha cidaanka ammaanka, Dan Eliasson, ayaa sheegay in boolsku maalgelin ku sameeyn doonan 14 xaafadood, kuwan ayey ka mid yihiin Rinkeby, Tensta, Biskopsgården iyo Rosengård.
-Magaalooyinka Göteborg, Malmö iyo Stockholm ayaa boolisyada lugu soo kordhinaya. Xaafada Rinkeby na saldhig boolis ayaan dhowaan ka furi doona ,halkaas oo ay ugu yaraan 200 oo qofi ka sheqeeyn doonan, ayuu hadalka ku soo gabagabeeyay Eliasson.